MIYUU DHIRTA IYO LIINTA? - DHIRTA DAWOOYINKA
Mucaaradka iyo kalluunka liinta - sida loo kala saaro dhirta
Goobaha banaanbaxa iyo agagaaraha hantida gaarka ah waxaa badanaa laga helaa dhir udubdhexaad ah sida malmal iyo liin. Dadka intiisa badani waxay u badan yihiin in ay mariyaan shaah iyaga, laakiin marwalba ma hubi kartid in geedka ay kuugu horeyso. Waxay leeyihiin muuqaal iyo ari la mid ah, taas oo ah sababta keentay jahwareer. Sidee loo kala soocaa ka samaynta malmalka liinta iyo waxa dabeecadaha dabiiciga ah ee warshad kasta, maqaalkan ayaa sheegi doona.
Miyirbaal iyo liin waa isku mid?
Si aad si fiican u fahamto kala duwanaanta u dhaxaysa labadan dhireed u jeestay beerta. Peppermint waxaa lagu magacaabaa caleenta dhirta Laminae ee qoyska, noocyada oo dhan kuwaas oo leh caraf xoog leh, iyo qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale ku jira tiro badan oo ah menthol.
Ma taqaanaa? Magaca cirku wuxuu ka yimaadaa Magaca moolka, munaasabada Mount Mente, oo ku taala Elide. Sida laga soo xigtay halyeeygii, waxay ahayd lafa-beelkii ilaahii haadkii Hades, taas oo xaaskiisa u beddeshay geedka geedka.
Melissa officinalis waa dhir diiran oo qoyan, kaas oo, sida finan, waxaa iska leh qoyska Laminae, cirridka kaliya ee ka timaada waa Melissa.
Melissa iyo naadiga ayaa leh farqi weyn oo ku saabsan sifooyinka kale, sidaa daraadeed waa ammaan in la yiraahdo kuwani waa geedo kala duwan, in kastoo badanaa la rumeysan yahay in mintu ay tahay kalluunka liinta.
Sidee u kala soocaan udub dhexaad ah iyo beedka liinta ee muuqaalka
Haddii aad si taxadar leh u tixgeliso dhirta labadaba, waxaad hubin doontaa inay kala duwan yihiin muuqaal. In stem stem waa toos, iyo ubax guduud ah ayaa lagu soo ururiyey inflorescences, oo u eg dhagaha. Warshadu ma koraan hal mitir, inkastoo xaaladaha intooda badan ay xitaa ka yar tahay (ilaa 30 cm). Caleemaha badankoodu waa oval, laakiin waxa laga yaabaa inay leeyihiin foomka lanceolate oo leh dhamaadka calaamadda. Xididadu waa dhuuban yihiin
Fruiting Mint waa dhacdo dhif ah, laakiin haddii aad nasiib leedahay oo aad aragto midhihiisa, waxay noqon doontaa wax yar oo adag oo laga yaabaa in timaha ku jira qaybta sare. Gudaha waxaa ku jira afar qurux yar.
In Melissa, laamihii asliga ah (timaha dushiisa), ubaxyada waxaa lagu uruuriyaa siddooyin been ah (6-12 waliba midkiiba) oo lagu rinjiyeeyo midabada. Heerka ugu sarreeya ee warshadu gaarto 1.5 mitir, inkastoo inta badan waa wax yar. Leaves, sida midhaha, waxaa lagu gartaa qaab oval ah (ovoid).
Ma taqaanaa? Haddii aad aaminsantahay waxa ay aaminsan yihiin, naasku wuxuu awoodaa in uu kordhiyo nolosha aadanaha, sababtoo ah, waqtiyadii hore, waxaa laga heli karaa guri kasta.
Miyuu ukumi karaa kareemka liin iyo maro
Waxaa laga yaabaa in farqiga u dhaxeeya jinka iyo melissa ay tahay urta. Miisaanku wuxuu ku dhawaaqay dhismayaasha aphrodisiac waxaana lagu gartaa ari dabeecad ah. Melissa waxaa kale oo lagu gartaa ur wanaagsan, laakiin maaha mid aad u jilicsan, oo leh far la mid ah liinta nalalka liinta. Warshadani waa geedka weyn ee malab, sidaas darteed waa ku haboon tahay koritaanka agagaarkeeda.
Farqiga u dhexeeya jajabka iyo melissa marka la eego guryaha dabiiciga ah ayaa ka badan marka la arko muuqaalka kormeeridda dhirta, taas oo ah sababta dad badan oo xagaaga deggani ay u kala soocaan oo kaliya sababtoo ah nuucaan.
Isbeddel muhiim ah oo ka kooban kiimikada iyo guryaha
Ma ahan qarsoodi in naasku leeyahay saameyn tonic ah oo wanaagsan, iyo beedka liinta waa qashin, taasoo badanaa sabab u ah ka kooban kiimikada. Sidaa daraadeed, ka dibna waxa ku jira qadar badan oo ah saliidaha lagama maarmaanka ah, sidoo kale wuxuu leeyahay walxo sarreeya oo ah acids oo buuxa (0.246 g), dufanka (0.94 g) iyo fiyuusta cuntada (8 g). Intaa waxaa sii dheer, dhirta ayaa jirta iyo fitamiino badan: A, B1, B2, B3, B6, B9, C, PP, iyo kuwa macdanta ayaa ka samaysan kareem, manganese, kalsiyum, fosfooraska, magnesium, zinc, birta, potassium iyo sodium. Sababtoo ah saamigaan, farqiga u dhexeeya melissa iyo naani ayaa sidoo kale ku jira saameynta xanuunka ee dambe, iyo sidoo kale in uu anti-bararka, suuxinta iyo choleretic guryaha.
Waxyaabaha kiimikada ee kalluunka liinta waxay aad u la mid tahay qayb ka mid ah naadiga. Dabcan, ma ku jiraan asiidh dufan iyo fiyuusta cuntada, laakiin waxay ka kooban tahay fiitamiinada iyo macdanaha isku midka ah, oo kaliya marka la isku daro. Vitamiin A, B1, B2, B6, B9 iyo fitamiin C, iyo sidoo kale horay loogu soo sheegey naxaas, zinc, fosfooraska, sodium, manganese, kalsiyum, potassium, magnesium, iyo birta ayaa lagu soo bandhigaa beedka liinta.
Maxay yihiin dhirta sida rinjiga?
Sidaa darteed, waxaan hore u ogaanay sida melissa ay uga duwan tahay mid ka mid ah midabka ka soo baxa muuqaalka iyo guryaha kimikooyinka, laakiin tani macnaheedu maaha inaadan isku wareeri doonin dhirta kuwa kale oo la mid ah. Haddii aan ku xisaabtanno oo kaliya sawirka, oo aan tixgelinno tayada kareysa, ka dibna naasku wuxuu aad u la mid yahay dhagaxa cagaarka ah (geedka cad cad) iyo xubno kale oo ka mid ah qoyska Youtnotkov: oo ku burburaya dhibaatada jimicsiga, gawaarida caadiga ah ee reer Yurub, Dubrovnik caadi ah, pachucha caadi ah,
Waa muhiim! Noocyada intooda badani waa geedo aan qabin oo si fiican u dhasha, sidaas awgeed waxaa jira feejignaan sareeya oo lagu arki karo qaybo ka mid ah beerta aadan ku beeran.
Intaa waxaa dheer, mint laftiisa ayaa sidoo kale leh noocyo badan, kuwa ugu caansan kuwaas oo ah:
basbaaska (inta badan la badhaxsado isticmaalka cunto karinta, daawooyinka ama ujeedooyinka guriga);
xayawaanku (calaamad u ah caraf udgoon iyo maqnaansho dhadhan qabow);
Japanese (waxay ku kala duwanyihiin ubaxyo waaweyn oo lilac ah);
dheer-caleen (koray cagaarsho si loo helo saliid asaasi ah);
Beeraha (lagu soo bandhigay qaab ah warshad duurjoogta ah, oo inta badan ku kora goobta);
bisad ama catnip (bisadaha ugu quruxda badan ee bisadaha, taas oo, sida Melissa, uu leeyahay nacnac liin yaryar).
Qaar ka mid ah dadka degaanka xagaaga ayaa inta badan ku wareersan melissa iyo catnip, laakiin xaqiiq ahaan labadan dhir ayaa leeyihiin kala duwanaansho weyn. First of dhan, halabuurka kiimikada ee saliidda iyo tirada ay lama magacaabi karaa isku mid ah, in kastoo carafka dhirta this waa mid aad u la mid ah dawooyinka melissa. Kala duwan iyo aagga koritaanka dhirtaas. Inkasta oo catnip ay ka badan tahay aagga kaynta-kore, gudaha Crimea, Kawaska ama Bariga Fog, kalluunka yaryar iyo liinta ayaa doorbidaya gobollada koonfureed.
Waa muhiim! Badanaa, cagaarka liinta waxaa loo yaqaan lemongrass ama melissa, laakiin magaca dambe, ma aha mid gebi ahaan sax ah, sababtoo ah naasku waxaa loo arkaa in uu yahay geedka gebi ahaanba ka duwan, inkastoo ay ka tirsan tahay isla qoys.
Wax kasta oo ay ahayd, laakiin roodhida iyo liinta waxay leeyihiin waxyaabo aad u faa'iido badan leh oo leh codsiyo badan oo kala duwan oo aan ahayn oo keliya nolol maalmeedka, laakiin sidoo kale koolhoolojiyada iyo daawada. Shimbiraha dhirta leh ee ka qaybgalka dhirtaas waxay labadaba hagaajin karaan codka jirka oo idil, oo leh saamayn nasasho ka dib maalin shaqo adag.